UKhune unqabe inkontileka yeChiefs, usethole iqembu phesheya - Impempe
UKhune unqabe inkontileka yeChiefs, usethole iqembu phesheya
February 28, 2021 February 28, 2021 Impempe.com
Sekuvele ukuthi u-Itumeleng Khune useyinqabile inkontileka entsha kwiKaizer Chiefs, kanti Impempe seyingakuveza ngokukhehekile ukuthi lo nozinti usezoyodlala eQatar kusukela ngesizini ezayo.
Inkontileka kaKhune neChiefs iyaphela ngoJuni kanti leli qembu laseNaturena belinombandela wokuthi bangavuselela ngonyaka.
Kodwa uKhune uqoke ukuthi ungabe usafakwa lo nyaka ngenxa yokuthi usefuna ukuyozwa inselelo entsha kwenye indawo.
UKhune – oneminyaka engu-33 – selokhunahlala kuMakhosi kusukela ngo-2004 futhi washeshe waba yisilomo ngemuva kokuthatha indawo kaBrian Baloyi.
“Uyinqabile inkontileka entsha yeChiefs ngoba ubesebona sengathi usehlale kakhulu futhi sekuyisikhathi sokuthi kungene omunye unozinti endaweni yakhe.
“Abaphathi bakhe babe sebemzamela umsebenzi phesheya njengoba manje esezoya eQatar uma kuphela isizini. Angazi kahle kodwa ngizwe sengathi usesayinile vele inkontileka yesibambiso,” kusho oaondelene nalo nozinti ongathandanga kuvezwe igama lakhe.
Kuvele nokuthi uKhune wahlala phansi nosihlalo weChiefs, uKaizer Motaung baba nengxoxo ende la achaze khona kahle ngenhloso yakhe yokushiya. UMotaungube esezoqonda izifiso zakhe wamkhulula ukuthi usengahamba.
Previous Previous post: Akafuni ukuziqhakambisa umdlali wePirates osize bebukisa ngeMaritzburg
Next Next post: Izikhokhisele ngesibhaxu ngokuphoxwa kwayo iSundowns